I-Ronald Bernard debacle nokuqothulwa okulawulwa kwezinkolelo zendlovu: uMartin Vrijland
I-Ronald Bernard debacle kanye nokubhujiswa okulawulwa kwezinkolelo zendlovu
ahanjiswe [I-AIRD ALARM], IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-28 Agasti 2017	• 16 Amazwana
Ngesikhathi i-intanethi isanda kufika kwakungamnandi futhi awukwazanga ukulinda isivinini esengeziwe futhi ungasesha futhi ushintshe ulwazi oluthe xaxa. Phakathi naleso sikhathi, asazi noma iyiphi engcono nakancane izizukulwane ezincane, isikhathi lapho kwakungekho khona amafoni omakhalekhukhwini mhlawumbe kuyisikhathi esidala kakhulu esingasithandi ukuhlala kuso. Awufuni ukubuyela emuva kumqeqeshi wesitimela noma umqeqeshi wesiteji. Konke kuhamba ngokushesha futhi isikhathi sokubheka izihloko kubonakala sengathi sifushane futhi sifushane. Intsha ixhumana nge-Snapchat ne-Instagram. I-Facebook isetshenziselwa ukushaya ucingo lwe-Facetime futhi ku-Snapchat ungabona ngqo ukuthi abangane bakho bayini. Ungakhubaza leyo nketho, kodwa lokho akunjalo okupholile. Ungayisebenzisa futhi ukuhlukumeza isoka lakho, ngokwesibonelo, ngokubonisa ukuthi unesidingo sakho. Abantu abasha manje bakhathazekile ngezinto ezinjengalezi. Konke mayelana namavidiyo ambalwa wabangani bakho, izinto ezibukwa kakhulu ezibukwa kakhulu. Kunjengomphunga wamanzi; Ngomoya owodwa into into ehlambalazayo noma into elalayo ngaphandle kwesikhathi. Ukufunda i-athikili akusekho okuthakazelisayo kwabaningi namuhla. Labo abanezemfundo ephakeme bangase bakwazi ukulalela, kodwa ngokuvame ukuhlushwa kwengqondo kanye nokwaziswa okubonakalayo kubonakala sengathi kuyanda kakhulu. Lokho akulona umbiko ovela ezifundweni zezibalo, kodwa nje ukubuka komlobi ongayiphendula ngokuphepha.
Uma usukwazi ukufunda isigaba sokuqala, usuhambe kakade kunaningi. Ukusuka izimpendulo kuya ku-Facebook okuthunyelwe Ngiyabona ukuthi abantu bavame ukufunda kuphela isihloko futhi hhayi okuqukethwe kwangempela kwe-athikili. Ngokufunda isihloko, abantu bacabanga ukuthi sebevele baqonda okuqukethwe futhi bavame ukunikeza umbono wabo ngesihloko ngokuphendula okufutshane. Okuqukethwe ngokuvamile kuvunyelwe, ngoba yini umlobi angasho ukuthi awukazi? Awukwazi ukusola abantu. Kuyinto ehambelana nesivinini sokuxhumana ukuthi i-intanethi iye yanda futhi inani lwazi abantu abalibonayo. Awukwazi ukufunda konke ngakho-ke yenza ukuskena okusheshayo okusekelwe ezihlokweni. Izithombe ezinama-one liners ngokuvamile zenza kangcono kunesihloko. Yingakho i-Twitter kungenzeka ukuthi ithandwa kakhulu, ngoba kufanele ufake umlayezo wakho kumusho we-1. Ngakho-ke uma ngifuna ukukwenza ukuba ufunde lesi sihloko, isihloko kufanele sithinteke. Isihloko esingenhla cishe sasingathandeki kakhulu ukuthi abaningi bafunde. Ukube ngabe ngibhale 'Ubufakazi obunzima emlandweni weRomy & Savannah, i-jihadi DNA etholakala kusikhali sokubulala", khona-ke lesi sihloko cishe sahamba ngegciwane. Khona-ke lesi sihloko sizovulwa futhi abantu bangaskena ngokushesha ngamazwi afuna lobo bufakazi obubonisiwe.
Ngakho-ke ingqondo yomuntu isetshenziselwa ukwaziswa okusheshayo nokuphequlula okusheshayo kolwazi oluwusizo. Awukwazi ukusola umuntu ngalokho; ungathola ukukhathazeka ngakho (njengokuthi mhlawumbe kunjalo nezizukulwane zakudala), kodwa lokho akusizi ngalutho. Futhi awukwazi ukusola abantu ngokungakwazi ukugibela ihhashi ngendlela ethule, kodwa kunalokho ukugijimela ngokushesha emigwaqweni ngezimoto ezifinyelela kalula ku-200 km / ihora. Usebenzisa izinsiza onakho futhi indlela yakho yokuphila iguqula ngayo. Konke kuhamba ngokushesha, ububanzi banda futhi ukunakekelwa kwesikhashana kunciphile. Ngaphezu kwalokho, sisetshenziswa ngokuphindaphindiwe ukuba siphila emasimini afana nemicabango, ngenxa yokunyuka kwembonini yefilimu futhi manje embonini yezemidlalo.
Kungani lokhu kusungulwa okujulile (okungenzeka ukuthi usuvele usuqhelile uhlangothi)? Ngifuna ukwenza iphuzu. Ngombono wami, ukunakekelwa okuncane kwengqondo yethu kungesizathu esenza abantu kube lula ukuthonya. Kufana nokukhuphuka iNtaba Everest. Uma ukhuphuka kakhulu kakhulu, umzimba wakho ngeke ube nesikhathi sokujwayela isimo esisha futhi singakubulala. Uma ungathathi isikhathi sokungena ezintweni, khona-ke uya ngezinhloso ezakha isithombe sakho seqiniso. Sikubone lokhu ezinyangeni zamuva ngokuvela kweqhawe elisha eliye lavunyelwa yiwo wonke abezindaba. Inselele yakhe nguRonald Bernard. Le ndoda yayiphakanyiswa ngokugcwele ngoba yatshela indaba yokuphila ezinxenyeni ezimbalwa zemininingwana emaminithi ambalwa kuphela. Ngaphambi kokuba ngibe ngumphathi wezwe jikelele wokuthengisa esikhundleni sami sokugcina, nginezingxoxo ze-4 ngezinye izikhathi amahora we-2. Ngaphambi kokuxoxwa kokugcina kwakudingeka ngithole ukuhlolwa okujulile kwengqondo, ekugcineni kufingqa izingxoxo ezedlule emva kwengxoxo yesine bese ngenza izingxoxo zemiholo. I-CV yakho izohlolwa futhi ngokugcwele. Yile ndlela izinkampani ezenza ngayo ngaphambi kokuba zibe nomuzwa wokuthi ulingene ngaphakathi kwenhlangano futhi zibeka kuwe iphothifoliyo yakho. Kodwa-ke, uma ubheka izingxoxo zikaRonald Bernard, khona-ke kubonakala sengathi akukho mbuzo obalulekile. Indoda itjela indaba. Akukho okuqinisekisiwe bese efika nendaba entsha ngokuthi "ubufakazi" bezindaba zakhe. Into ekhethekile yukuthi abantu bayamnika le ndoda imali yabo ekuqaleni kokubhange lakhe elisha; i-Happy Bank. Ngenxa yalokhu bathenga isitifiketi esinemali engu-€ 100, ekhonza ukuthwala izindleko zokuqala zebhange. Kwenzekani kulokho € 100 uma lokhu kuqala kuqeda umbuzo omkhulu.
U-De Volkskrant wabika lesi sihloko kusukela ngo-26 Agasti ukuthi abantu be-5000 babesele bebulewe kakade. Ukucabanga ukuthi bonke labo bantu be-5000 bathengile isitifiketi, esivele sinikeze isigamu sezigidi. Futhi konke okusekelwe endabeni! Kumelwe ngitshele ukuthi ngicabanga ukuthi kuhlakaniphile ikakhulukazi nakulolu chungechunge lwama-athikili mayelana noRonald Bernard (funda lapha: isihloko se-1, isihloko se-2 en isihloko se-3) Ngachaza ukuthi lokhu kungenzeka ikakhulukazi ngenxa yamasu we-NLP amavidiyo aphikisiwe ngawo. Isizathu esibalulekile esenza lezi zindlela zisebenze kangcono futhi kangcono ukubhekwa kwesikhala okuchazwe ngenhla. Ngenxa yokuxhumana okusheshayo, abantu abakwazi ukuma futhi bafaka amabhuleki bese bethi: "Linda iminithi, kuthiwani ngalokhu futhi kuthiwani ngakho?Ngaphezu kwalokho, sesijwayele indlela ethile yokuqopha kanye nokugqoka ikhodi eyenza sikholwe ukuthi kukhona iqiniso. Indoda esesitokisini esinezinwele ezithandekayo isikhumbuza ngokungazi kahle ibhizinisi lebhizinisi eliphumelelayo noma umhloli wezindaba onokwethenjelwa. Siphethwe kanjalo. Uma ngabe ngikutshele ngombono wami ongaphephile ngethempelini ne-jeans, ingqondo yakho engacabangi ingayifaka leyo "nge-bon vivant" noma "i-beachboy."
Ngivame ukugxila ekukhulekeleni ulwazi olungenalo ulwazi emithonjeni ejwayelekile. Kodwa-ke, lapho ngiqala ukuqaphela ukuthi lo Ronald Bernard hype wayelokhu ebambelela abafundi bami, ngaqala ukubheka ngokucophelela. Ngokushesha kwabonakala ukuthi yonke imidiya ehlukile isebenzisa lokhu izindaba ezingenakuthenjwa womuntu. Ubizwa nangokubizwa ngokuthi "umloli" kwezinye izindawo, kodwa incazelo yomshoshaphansi "umuntu obala ukuhlukunyezwa futhi uphakamisa lokhu ngobufakazi." Lokhu kungenziwa, ngokwesibonelo, ngokusho umuntu okhonké nehhashi ngokuphathelene nokuhlukunyezwa kwinkampani noma inhlangano. Kodwa-ke, kulokhu, ziyizindaba mayelana nomhlatshelo womhlatshelo wengane noma ukuthengiswa komzimba kwezitho ezizothathwa ezikhungweni zezingane eNdiya. Akukona ukukhala ngehora elilodwa ukwenza okungalungile ukufakazela, okungukuthi tshela indaba ngaphandle kokunikeza ubufakazi.
Kubonakala sengathi kwenziwa isinqumo sokuqeda le ndoda kanye nezindaba zakhe ngokusebenzisa enye imidiya. Phela, wayezokwazi ukuthengisa umqondo wakhe weBless Bank ngaphandle kwalezi zindaba. Akukho lutho olubonakala lungalungile ngomqondo webhange. kukhona ngisho ne-baron nomnumzane ebhodini lokucebisa, ngakho amandla abonakala ekhona. Kodwa uRonald Bernard uyazi kahle die ukubiza izinto ezithinta isici esibucayi ngaphakathi kweminye imidiya. Ngakho-ke iBhange Elihle libonakala lifakwe eqenjini elikhulayo elibhekiswe kulo: 'abacabangi bezinhloso zokuqamba'. Akusilo yini ukuthi i-springboard ekahle nemakethe yokuqalisa umqondo onjalo ku-Happy Bank? Ungazibuza kuphela ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi othile obiza ukuthi kukhona imihlatshelo yengane emzileni ngaphakathi kwemibuthano ye-elitist angasebenza ndawonye nabantu abavela ku-elite efanayo. Isibonelo, uBaron Anthony Coleiro uke wabuza uRonald umbuzo obalulekile ngalokhu? Ingabe uMnu. Arnoud Six uke wazama ukuhlola uMnu Ronald? Ukuthi uMnu. Coleiro naye uyilungu le-Byzantine Order (okubonakala sengathi uhlobo lwe-Maltese Freemason oda), masingathathi lokho.
E-US sinomcabango odumile we-conspiracy Alex Jones ngewebhusayithi yakhe inforwars.com. Lokhu kwavela nendaba eqinile eyenza umqondo omkhulu. Ubani ongazi izithombe ezingaphansi komhlaba lapho u-Alex Jones akwazi khona ukungena e-Bohemian Grove ngekhamera efihlekile. UJonathan wakwazi ukubonisa ukuthi umhlatshelo womntwana wenziwa kanjani, emi phakathi kwezilaleli ezibekelele kakhulu zabaholi bezwe. UJonathan wayengenakusho ngempela ukuthi kwakuyidonsa noma ingane yangempela, kodwa indaba yahamba ngegciwane lesandulela ngculaza futhi lokhu kwanika u-Alex Jones isimo somuntu oshaya umloli weqiniso. Wabuye waletha izindaba mayelana nesakhiwo se-911 nezinye izinto eziningi. Ekugcineni, u-Alex Jones waqala ukukhonza i-agenda ye-elite, eyabonakala ebonakala ezinsukwini zakhe zakuqala. Lokhu kwacaca lapho ekhuluma ngomkhankaso wokukhethwa kukaDonald Trump futhi empeleni wakhonza u-elite efanayo. Mina futhi ngiye ngaqeqeshwa endabeni ye-Bohemian Grove. Kwakubonakala kunokwethenjelwa. Kodwa ake sithembeke: ingabe ucabanga ngempela ukuthi uzongena nje njengomlobi wezindaba? Cabanga futhi ngakho! Kwadingeka futhi ngikwenze lokho. Uma sithatha isikhathi sokungenelela ekamu eliphansi ngaphambi kokuba sikhuphuke e-Everest futhi sijwayele izimo ezintsha ze-oksijeni, kungenzeka mhlawumbe sifinyelele esiphethweni sokuthi izinsizakalo eziyimfihlo ziyakwazi umuzwa ukunikeza umbono ekhishini lamandla okubusa. Yingakho uJones cishe wayevunyelwe lapho futhi yingakho engaboshwa njengomuntu ongaziwa kusayithi. Noma ukholelwa ukuthi ukulondeka kwakungalungile kuyilapho abantu abanjengoGeorge Bush nabanye abaholi bezwe behamba lapho? Ngake ngikholelwa futhi, ngoba izithombe zekhamera zazikholelwa kakhulu. Futhi ngangifuna ukukukholelwa kabi kabi.
Endabeni kaRonald Bernard singenza mhlawumbe senze okufanayo, ngaphandle kokuthi ku Bernard kukhona indaba eyodwa kuphela. Ukube wayevele ethatha inkathazo ukuthungela umshini wokuqopha noma ikhamera efihliwe kulezo zinsuku zokuzinikela ezinganeni, ngabe okungenani wayenokwethenjelwa kancane. Ngombono wami, abantu abanjengoRonald Bernard baqaliswa izinsizakalo zemfihlo. Indaba yabo kumele inxuse emkhakheni wezingcweti ze-conspiracy. Ukuthi iphephandaba elivamile njengeDe Volkskrant manje linikezela indaba kufanele lisenze siqaphile. Isibonelo, igama lami alikaze likhulunywe kunoma yiliphi iphephandaba noma i-outlet yemidiya ejwayelekile. Lokhu ukuvimbela abantu ukuthi bangaboni futhi baqede ngempela umhloli weqiniso ozimele futhi bavotelwe ukucabanga okubalulekile. I-maxim ibonakala sengathi yilabo kuphela amagama eminye imithombo ebekwe ensimini elawulwayo yamasevisi eyimfihlo kusukela ekusungulweni kwayo ingachazwa. E-Netherlands sibheka le nsizakalo i-AIVD (Insizakalo Jikelele Yokuhlakanipha Nezokuphepha). Kuyamangalisa ukuthi lezi zingosi (ezifana ne-WantToKnow, Earth Matters, Regular News, njll) azihlangabezane nanoma yikuphi ukuphikiswa okuphawulekayo. Ngichaze ngokuningiliziwe ukuthi lokhu kwenzeka kanjani kimi kusukela ekuqaleni futhi kusenzeka lesi sihloko. Ungathola umehluko kulokhu. Kuye kwacaca ngokucacile emavikini amuva nje ukuthi ama hares asebenza kanjani nokuthi yonke imidiya ehlukile njengoba sasicabanga ukuthi yaziwa, yasungulwa kusukela ekuqaleni njengenetha lokuphepha labafunayo beqiniso (funda: 'abantu abaqala ukuhamba nabo akuwona wonke amaphephandaba ajwayelekile usitshela - ukusho okungenani-njalo njalo njengokwethenjelwa '). Lokhu 'i-Alex Jones effect', njengoba ngikubiza kanjalo, kuzophinde kwenzeke eNetherlands futhi abantu abanjengoRonald Bernard, u-Irma Schiffers, uGugu Jonkers, u-Arjan Bos namanye amagama amaningi aziwayo emithonjeni ehlukile eminye izobe ihlinzeke ngokusemthethweni. ukuze ukwazi ukusho: Izingosi zezinhlelo zenziwe izindaba ezikhohlisayo.
Lezi zinsizakalo zigcwalise i-intanethi ngehlathi elinama-opaque lamawebhusayithi amaningi anokuletha 'cishe iqiniso'. Ngenxa yalokho, abantu ngokwanele abasaboni ihlathi lemithi. Futhi lokho kubonakala sengathi bekuyiyona njongo yalokhu 'umphakathi weqiniso'. Sifakwe embukisweni wesakhiwo esilawulwe yilo 'qiniso lomphakathi', elihlehliswa ngokuphelele ngokubhujiswa okulawulwayo, ukuze abantu babuyiselwe emuva 'emithonjeni ejwayelekile engokwethenjelwa'. Singabona futhi ukushintshwa kwezinye izinto ezilawulwayo, lapho isibonelo u-Alex Jones 'Infowars angakhula futhi athathe indawo ye-CNN neFOX News (futhi abone inqubo efanayo eNetherlands kuleso siqhathaniso), kodwa uma zombili izinhlangothi usadukiswa.
Yiqiniso kuyoba khona abantu noma amawebhusayithi eminye imithombo yaseNetherlands ngemuva kwezingqungquthela zami mayelana noRonald Bernard oyozama ngokushesha ukusula izitaladi zabo futhi azidele kude noRonald Bernard. Siphinde sibone ukuthi eminyakeni embalwa eyedlule lapho ngidalula Micha Kat. Kodwa uhlale ubona ukuthi 'okunye okushicilelwa kwezokuxhumana' akubheki neze ngokwenyama yakhe futhi awusoze wabona ukusekela ummangalelwa uMartin Vrijland. Lona uphawu olucacile odongeni. Amawebhusayithi asebenza ngokuyimfihlo egameni le-GISS angeke abonise isimo sabo sangempela. Babezokwahlulelwa kakhulu ngalokho. Ngakho-ke kuwe, umfundi, ukuze uvuke ngempela umdlalo udlalwa. Ingabe ucabanga ngempela ukuthi izinsizakalo zizoshiya iqembu elikhulu livuse noma lingase livuswe elingathintekile? Ngaleso simo, ngiyaqhubeka ngiphinda ngisho ukuthi uVladimir Lenin uthi: "Indlela engcono yokulawula ukuphikisana ukuwuphatha ngokwakho". Uma ubamba umthengisi bese umbuza ukuthi ufuna ukuvuma iphutha lakhe, uzohlala ethi "Angihlanzekile". Uma ubeka umbuzo eminye imidiya noma ngabe isebenza ngensizakalo eyimfihlo noma idlale indima kabili, bayohlala bekhipha zonke izitobhi ukuze bakholwe ukuthi lokhu akunjalo neze. Kuthatha isibindi esincane ekungeneni kwakho ukukhuluma okuhle esontweni elisha abafundisi babo owazi kahle kangaka futhi uthemba. Kungenzeka ukuthi uhlangane nabo ngomuntu futhi babonakala bengabantu abanhle futhi abanokwethenjelwa. Ingabe akuyona leyo njongo yenetha lokuphepha? Abaholi kumele bahlangabezane njengokwethenjelwa nokwethenjelwa. Ngathi ngiyekezela esontweni ngisemncane futhi manje ngithi ngiyekezela esontweni elinye lezindaba kanye nabesilisa nabesifazane babo ngaphambili.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: volkskrant.nl
URonald Bernard, u-Irma Schiffers, u-Ad Broere, i-Coöperatie Vrije Media: Amanethiwekhi okuphepha e-AIVD abafuna iqiniso.
URonald Bernard wamukela umdlali omuhle ngezindaba ezihlukile
Ingabe i-AIVD ilungise amaqhinga e-East German (DDR) eStasi eNetherlands?
Ingabe ikhona noma cha 'ukuhlukumeza izingane ngokocansi nokuzinikela kwengane'?
Ividiyo ye-Ronald Bernard iyingxenye ye-3 iphinde igcwele amasu we-NLP
Amathegi: okunye abezindaba, u-Baron Anthony C. Coleiro, afakiwe, Guido Jonkers, Irma Schiffers, UMnu. Arnoud Six, URonald Bernard, umphakathi weqiniso
28 Agasti 2017 ku-12: 09
Uyakhumbula ukuthi cishe wonke umnyango wezokusakaza (i-Poelenburg Ismael Ilgun isango) ukholelwa emehlweni aluhlaza okwesibhakabhaka nokuthi lapho wonke abezindaba baseDutch bekholelwa i-circus yasePowelenburg ehlongozwayo, ukhumbule ukuthi kwakusekelwe emangeni amakhulu.
Abekho umsakazo we-1 uye waxoshwa. Indaba ePowned yasePoelenburg yayibonakaliswa ngemuva kokucwaninga kwangempela. (akukaze kube khona i-treitervlogger, eyayiyi-actor)
Futhi manje i-crybaby kaRonald Bernard ogqoke isihlangu segolide yi-media engekho (inkohliso) ehlukile futhi abantu bayakholelwa emahlwini akhe aluhlaza okwesibhakabhaka, izindaba kanye nobuso be-acid-ukudonsa ngezindaba kuphela kanye nezinye izindaba.
Akukhona nje kuphela ukuthi wonke umuntu uthola intuind, yilokho ngempela uMartin athi kuyisimo esandulele.
I-Heer Vrijland ngiyabonga kakhulu ngesilumkiso, ngezansi umuntu onjengoko lowo osolwa ngokungenalutho wangena kulo ... futhi empeleni ukuhumusha sekuvele kubhalelwe izinyanga, ngabe umthengisi
28 Agasti 2017 ku-12: 32
Ngisho nalabo abaxoshwa njengale PowNed abaxhaswanga yi-1 enye indawo yesimanje. Baphinde bathula njengamathuna. Lokhu kusebenza nasekudaleni ukubonakaliswa kwePegida / Antifa, lapho kwakukhona nesiqondiso esiqinisekisiwe.
Ngamafuphi ... bathula njengamathuna ngaleso sikhathi lapho kufanele bavule imilomo yabo. Ngakho-ke abafanelekile futhi futhi.
28 Agasti 2017 ku-16: 02
Buka ividiyo ikhamera ithunyelwe ngenhla ku-youtube (chofoza ku-youtube icon)
Bese ubheka ukusabela kokuqala.
Ngaphansi kwempendulo yokuqala yizimpendulo ze-63.
Kulezo zimpendulo akusilo ngokujabula B kodwa ikakhulu ngoJesu Kristu, uSathane.
Lokhu kungenxa yokuthi i-youtuber yamaKristu ekhohlisayo iye yadideka ngokuyinhloko amaKristu okuthiwa 'aphapheme' njengabalandeli, kodwa lapha INHLANGANO YENkolo yeRonald Bernard, obonakala engumKristu, iveza izithelo.
I-verhip isebenza, AKUNYE "wabavuli beqiniso abavukile" abangamaKristu noma abangabonakali ukuba baphapheme. Badla indaba kaDonald Bernard yonke yokudaka ikhekhe elimnandi, ngoba lokhu "yilokho abakwazi kakade"!
28 Agasti 2017 ku-16: 06
Izingane ezihlatshiwe. Bathanda iphariji.
29 Agasti 2017 ku-06: 37
22: 25 "Ufuna ukumisa?"
Cha, akunjalo hhayi isiketi! Ngicishe ngiphathe ukukhiqiza izinyembezi.
28 Agasti 2017 ku-15: 15
Pfff kancane piece piece
28 Agasti 2017 ku-15: 16
Isihloko esihle kakhulu uMartin.
28 Agasti 2017 ku-17: 03
Isihloko esihle asikwazi ukusho ngenye indlela.
28 Agasti 2017 ku-17: 43
Ngiyavuma ubuchopho, isihloko esihle.
Uma ngingakwenza lokho ngabe ngabe ngiyibhalile, kodwa angikwazi.
Yingakho ngiyajabula ukuthi nawe ungenza futhi uMartin!
Ngakho-ke bonga uMartin, ubhala amagama ekhanda lami kodwa ngesakhiwo esicacile.
28 Agasti 2017 ku-20: 25
Isihloko esihle kakhulu futhi. Siyabonga ngokuveza uMnu Bernard. Kuhlaba umxhwele nokuthi uqhubeka kanjani ukutshela amavidiyo akhe ngendlela ehlaba umxhwele ngokuphathelene nezinto ezimbi ayezibonele. Uma beyiqiniso noma ngabe wayenomuzwa, angeke akwazi ukutshela ngokumomotheka okunjalo okukhulu. Ngicabanga ukuthi lokho akunakwenzeka. Lokho kumamatheka kunamathele ebusweni bakhe, ngakho-ke kunamahloni. Uhlehle kakade ukuthi bangaki abantu abazobe balimi lapha futhi bamsekele ngezinkulungwane zama euro. Khuka dude!
29 Agasti 2017 ku-04: 48
Yebo, sihlala futhi. Amakhaza ngemuva kwezindlebe zethu. Kodwa sihlala sam hamsters ezilawulwa amandla aphezulu.
Lokhu kwenzeke ezinkulungwaneni zeminyaka, ezinye izinkinga esiziqonda kodwa hhayi eziningi.
Landela inhliziyo yakho. Lokhu kuhlakaniphe ngaphezu kwekhanda lakho.
Noma kunjalo. Isihloko esihle. I-Thanxzz
29 Agasti 2017 ku-08: 43
Awekho amandla aphezulu, kodwa amandla ahlukile.
Futhi hhayi ukuqhutshwa, kodwa kuthonywe.
Akukho futhi akukho muntu ophakeme kune-SELF yethu.
Umshini wokudlala wabhala:
29 Agasti 2017 ku-06: 07
I-Super article Martin! Ngethemba abaningi bazolifunda!
29 Agasti 2017 ku-07: 16
Iningi 'izinkampani' ngeke zikwazi ukujoyina ibhange elinjalo. Bavame ukuzikhwabanisa ngokwabo, akubonakali njengeqembu elihlosiwe elihlose ukwenza imali futhi ngeke lihlotshaniswe nabantu abalungile. Izinhlobo eziya enkulumweni ye-Messing futhi ziya emihlanganweni kaVan Staveren yilabo bantu abazoba amalungu eqembu elitist elinjalo. Lezi zivame ukuba abantu abaye bavala ukucabanga okucabangelayo uma kuziwa endabeni elethwe uhlobo oluthile lokujwayela 'elitist' nomlingisi njengoBernard.
29 Agasti 2017 ku-08: 45
Izihloko ezinhle uMartin. URonald uyinkohliso. URonald ungumthengisi.
6 September 2017 ku-15: 09
Angikwazi ukumelana nokwenza isithombe kwi-timeline photo kaRonald B. Blij. Izindaba zakhe ezimnandi zilimaza kakhulu ekuqhubekeni okuqhubekayo kwesandi esibucayi ukuthi ngisayikhokha i-1x. Lokhu kubangelwa ukuthi yonke imidiya ehlukile ivuselela lezi zindaba ezingenakulinganiswa futhi maduzane kuzoba yi-alibi ephelele ukwethula 'inkonzo yeqiniso'.
« Ividiyo ye-Ronald Bernard iyingxenye ye-3 iphinde igcwele amasu we-NLP
Ingabe ikhona noma cha 'ukuhlukumeza izingane ngokocansi nokuzinikela kwengane'? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 14.618.623
Umeluleki wezepolitiki uhlongoza ukwakha amakamu okufunda kabusha!
Ingcindezi enikezwa izingane inkulu kakhulu!
Esimweni samaphoyisa, ufuna ukuvinjelwa kwamaphoyisa wokuthwebula ukuqhafaza kanye nabahlinzeki "bokusiza"
Yazi umlando ukuze uqonde i-ajenda ye-UN 2030
UMartin Vrijland op Umeluleki wezepolitiki uhlongoza ukwakha amakamu okufunda kabusha!
Ikhamera ye-2 op Ingcindezi enikezwa izingane inkulu kakhulu!
guppy op Umeluleki wezepolitiki uhlongoza ukwakha amakamu okufunda kabusha!
Ukushona kwelanga op Umeluleki wezepolitiki uhlongoza ukwakha amakamu okufunda kabusha!
UMartin Vrijland op Yazi umlando ukuze uqonde i-ajenda ye-UN 2030
© 2019 Martin Vrijland. Wonke amalungelo agodliwe. Isihloko ngu-Solostream.